तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको पांच होश प्रयोग तिथि-सेक्सी हुन कसरी
एक सेक्सी महिला को लागि स्टीरियोटाइप लुगा केही टुक्रा मात्र पहने पागल घटता संग एक पिन-अप केटी छ. तथापि, बस baring छाला भन्दा सेक्सी हुनु र कम्मरमा भएको अधिक छ, स्तन, र एक मोडेल को कम्मर. जब तिनीहरूले तपाईं महसुस तपाईं के हुन्छ भनेर भन्न, तिनीहरूले सही. तिमी कुरुप लाग्छ भने, आफ्नो शरीर एक धनु मा कट्टर अप्ठ्यारो र आफ्नो टाउको एक अप्ठ्यारो बाटो मा इशारा सक्छ, शायद आफ्नो अनुहार लुकाउन प्रयास. तर तपाईं महसुस हुँदा तपाईं सुन्दर र सेक्सी छन् भन्ने, आफ्नो आसन राम्रो छ, तपाईं अधिक निर्धक्क हिंड्न, र तपाईं अझ बढी ध्यान फसाउन गर्छन. त्यसैले कसरी मिति अघि सेक्सी बन्न गर्छ? सरल. आफ्नो पाँच सचेत लागि कार्य गरौं.
यो भनाइ जान्छ “आँखा प्राण को झ्याल”. प्रत्यक्ष आँखा सम्पर्क धेरै शक्तिशाली हुन सक्छ त राम्रो आफ्नो peepers घूरना पर्याप्त सेक्सी सुनिश्चित. आफ्नो eyebrows ट्रिम र कुनै पनि आवारा बाल हटाउन. यो बाटो, आफ्नो मिति कहिल्यै तिम्रो बन्द आफ्नो आँखा लिन चाहनुहुन्छ छैन.
तपाईं सेक्सी हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सेक्सी गंध मिल्यो. एक खुशबू छनौट एकदम चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ. एक स्टोरमा तपाईं हुनुहुन्छ भने केही सुगंध परीक्षण गर्न, पक्का कुनै पनि छैन लगाएका छन् बनाउन. यो बाटो, तपाईं साँच्चै तपाईं कोशिश scents लिन सक्छ, यसरी, सजिलो खुशबू निर्णय बनाउँदै. साथै, धेरै मिति पहिला आफूलाई douse छैन. आफ्नो मिति तालिका मार्फत आफ्नो गन्ध टिप्न सक्षम हुनेछ भन्ने पर्याप्त स्प्रे, होइन बाघको.
लोकप्रिय aphrodisiacs को एक सिपी छ. यसको क्षमता यौन ड्राइभ बढाउन भन्दा बढी, केहि प्रकार जस्ता धेरै समावेश, जो तेल छाला संग मान्छे को लागि लाभदायी छ. स्वाद को आफ्नो अर्थमा लागि अर्को सेक्सी र रोमान्टिक व्यवहार स्ट्रबेरी छन्. मात्र यो चकलेट संग खान एक सेक्सी फल हो, यो पनि आफ्नो मिति प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछैन भनी एक सेक्सी मुस्कान को लागि आफ्नो दाँत सेतो मदत गर्छ.
संगीत कसैको मुड सेट गर्न ठूलो तरिका हो. त्यहाँ तिमी देखि जाओ गीतहरू छन् “केटी अर्को ढोका” गर्न “वातहीन सेक्स देवी”. तपाईं अतिरिक्त बढावा आवश्यक छ भने आफ्नो मिति बैठक अघि तपाईं पर्याप्त विश्वास दिन, जस्तै गीतहरू सुन्न “Beyonce द्वारा शरारती केटी ", “बटन” Pussycat गुडिया द्वारा, आफ्नो भित्री देवी बाहिर ल्याउने वा केही.
एक सेक्सी शरीर भन्दा बढी, यो सेक्सी छाला गर्न महत्त्वपूर्ण छ. hydrated तपाईंको छाला राख्दै स्पर्श गर्न यो supple राख्न महत्वपूर्ण र नरम. पानी धेरै पिउन र सधैं आफ्नो स्नान पछि लोशन लागू. त्यहाँ सुख्खा बारेमा सेक्सी केही छ, chaffed छाला.